कोरियन ब्यान्ड बिटिएसको ‘डाइनामाइट’ युट्युबको रेकर्ड तोड्दै ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा ! «
कोरियन ब्यान्ड बिटिएसको ‘डाइनामाइट’ युट्युबको रेकर्ड तोड्दै ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा !
Published : 24 August, 2020 2:29 pm
दक्षिण कोरियाली म्युजिक ब्यान्ड ‘बाङ तान सोन्योनदान (बिटिएस)’ को नयाँ म्युजिक भिडिओ ‘डाइनामाइट’ले यति बेला निकै चर्चा बटुलिरहेको छ। अंग्रेजीमा ‘बुलेट प्रुफ स्काउट ब्वाइ स्काउट्स’ अर्थ दिने बिटिएस ब्यान्डमा सात युवाहरू सदस्य छन्। ब्यान्डको शुक्रबार सार्वजनिक ‘डाइनामाइट’ म्युजिक भिडिओले अहिले युट्युबको शीर्ष स्थान ओगटेको छ।
हालै सार्वजनिक म्युजिक भिडिओ ‘डाइनामाइट’ ले सार्वजनिक भएको २४ घन्टामै १० करोड ११ लाख बढी भ्युज कमाएको अमेरिकी म्युजिक म्यागजिन बिलबोर्डले जनाएको छ। योसँगै ‘डाइनामाइट’ ले एकै दिनमा सबभन्दा बढी भ्युज कमाउने युट्युब भिडिओ बनेर रेकर्ड कायम पनि गरेको छ। अंग्रेजी शब्दमा रहेको यो म्युजिक भिडिओ अगस्ट २१ मा प्रिमियर गरिएको थियो। प्रिमियरमै ३० लाख बढीले हेरिरहेका बिलबोर्डले जनाएको छ।
सन् २०१० मा गठित बिटिएसले सन् २०१३ मा आफ्नो पहिलो म्युजिक भिडिओ ‘टु कुल फर स्कुल’ सार्वजनिक गरेसँगै संगीत क्षेत्रमा औपचारिक रूपले प्रवेश गरेको थियो। यो ब्यान्डले प्रायः हिप-हप वा के-पप संगीतलाई केन्द्रमा राख्छ भने गीतमा व्यक्तिगत भाव, मानसिक स्वास्थ, किशोरावस्था र युवाहरूका समस्या, प्रेम, सामाजिक विषय तथा व्यक्तित्ववादलाई जोड दिने गरेको पाइन्छ।
ब्यान्डले विश्वभरका विभिन्न सांगीतिक सूचीहरूमा पनि शीर्ष स्थान ओगटेर रेकर्ड राखेको छ। ‘डाइनामाइट’ले गायक ट्रेलर स्विफ्टको ‘कार्डिगन’ लाई पछाडि पार्दै ‘स्पोटिफाइ’मा पनि नयाँ रेकर्ड राखेको बताइएको छ। ‘कार्डिगन’को स्ट्रिमिङमा ७७ लाख ७४ हजार भ्युज थियो भने ‘डाइनामाइट’ को ७७ लाख ७७ हजार पुगेको बिलबोर्डले लेखेको छ।
बिटिएसले गत जुलाइमै आफ्नो नयाँ एल्बम ल्याउने जानकारी दिएको थियो। तर कोरोना भाइरस महामारीका समय आफ्ना दर्शकसामु जोडिन एउटा गीत ‘डाइनामाइट’ भने सार्वजनिक गरिहालेको बिटिएसले कोरियाली सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन्।
ब्यान्डका लिडर आरएमले एप्पल म्युजिकलाई हालै दिएको अन्तर्वार्ताका भनाइ उद्धृत गर्दै बिलबोर्डले लेखेको छ, ‘यो डाइनामाइट हो। सकारात्मक ऊर्जा, आशा, प्रेम र शुद्धता मिलेर बनेको छ। हामी दर्शकसँग यो बाँड्न चाहन्छौं।’ यो उनीहरूको एल्बमकै पहिलो गीत भएको पनि सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्। युट्युबमा ‘डाइनामाइट’को भ्युज अहिले १७ करोड ७५ लाख हाराहारी पुगिसकेको छ।